ဝေဘူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော် မူလေ့ ရှိသော တရား အနှစ်သာရများ (The Essence of Buddha Dhamma) | The Noble Eightfold Path
ဝေဘူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော် မူလေ့ ရှိသော တရား အနှစ်သာရများ (The Essence of Buddha Dhamma)
သီလ ဆောက်တည်ပြီးလျှင် ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ကြ၊ ဖြည့်လို့ ပြည့်စုံပြီ ဆိုလျှင် မိမိစိတ်အလို တောင့်တတဲ့အတိုင်း ပြီးမယ်၊ ယခုလည်း ချမ်းသာမယ်၊ နောင်လည်း ချမ်းသာမယ်။
ပစ္စုပ္ပန် ချမ်းသာ၊ သံသရာ ချမ်းသာ ၂-ဖြာကို ပေးစွမ်းနိုင်တာဟာ ဘုရားရှင် အဆုံးအမတော်က လွဲလို့ တခြားမရှိဘူး။
ဘုရားရှင် အဆုံးအမဆိုတာ ပိဋက ၃-ပုံပဲ၊ ပိဋက ၃-ပုံ ဆိုတာ အလွန် ကျယ်ဝန်းတယ်။
ပိဋက ၃-ပုံကို အဆီ ထုတ်ပါလျှင် “ဗောဓိပက္ခိယ ၃၇-ပါး” ရတယ်၊ ဗောဓိပက္ခယ တရား ၃၇-ပါးကို အဆီ ထုတ်လျှင် “မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး” ရတယ်။ မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးကို အဆီထုတ်လျှင် “သိက္ခာ သုံးပါး” ရတယ်။
သိက္ခာ သုံးပါးဆိုတာ အဓိသီလ၊ အဓိစိတ္တ၊ အဓိပညာပါပဲ။
သိက္ခာသုံးပါးကို အဆီထုတ်လျှင် “ဧကောဓမ္မော” တစ်ခု ရတယ်။
ရုပ်ပေါ် နာမ်ပေါ်မှာ နေပြီး ယခုလို ဆောင်ထားတော့ (ရှုမှတ်နေတော့) ကာယကံ သောင်းကျန်းမှု၊ ၀စီကံ သောင်းကျန်းမှု မရှိဘူး။ ဒါ “အဓိသီလ” လို့ ခေါ်တယ်။
အဓိသီလ အားကောင်းလျှင် စိတ်တွေ သောင်းကျန်းမှု မရှိဘဲ ငြိမ်ဝပ် ပိပြားပြီး တည်နေတော့တယ်။ အဲဒါ “အဓိစိတ္တ” လို့ ခေါ်တယ်။
အဓိစိတ္တ (သမာဓိ) အားကောင်းလို့ အချိန်ကြာလျှင် ဘယ်လူ၊ ဘယ်နတ်၊ ဘယ်ဗြဟ္မာမှ ဖန်တီးလို့ မဖြစ်ဘူး၊ လျှပ်တစ်ပြတ်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်း ဖြစ်ပြီး ပျက်နေတယ်။ ရုပ်ကို နာမ်က သိနေလျှင် ဖြစ်ပျက်ကို သိတော့တာပဲ၊ ဖြစ်ပျက်ကို သိတာ “အဓိပညာ” လို့ ခေါ်တယ်။
အများနားလည်အောင် ပြောရမယ်ဆိုလျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ နှာဖျား နှာဝတွင် ထွက်လေ ၀င်လေ နှစ်ရပ်ဟာ အမြဲ တိုက်ဝင်၊ တိုက်ထွက် နေတယ်။
နှာဖျား နှာဝမှာ ကာယပသာဒ အကြည်က အထိခံ၊ ထွက်လေ ၀င်လေဖြစ်တဲ့ လေနှစ်ရပ် ၀ါယော ဖောဋ္ဌဗ္ဗက ထိတယ်၊ ထိုအထိခံနဲ့ ထိတာက ရုပ်၊ သိတာက နာမ်ဆိုတော့ ဒကာကြီး၊ ဒကာမကြီးတို့ သူများ မေးမနေနဲ့၊ ကိုယ့်နှာဝကို ဉာဏ်နဲ့ စောင့်ကြည့်၊ ၀င်တော့ ထိဝင်မယ်၊ ထွက်တော့လည်း ထိထွက်မယ်။ ထိတာကို သိလျှင် သိနေလျှင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဖြစ်ခွင့် မရလို့ လောဘမီး၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး ငြိမ်းတယ်၊ ငြိမ်းတော့ အေးတယ်။
မထိခင်ကလည်း သိလို့ မဖြစ်ဘူး၊ ထိပြီး ပြန်တော့လည်း သိလို့ မဖြစ်ဘူး၊ ထိတုန်းကိုသာ သိဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကို “ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်” လို့ ဆိုတယ်။
အဲသလို တစ်ထိတည်း(ထဲ) ထိနေတာကို တစ်ဆက်တည်း(ထဲ) သိနေအောင် ဆောင်ကြဗျ။ တစ်ရက် ၂၄-နာရီ တစ်စပ်လောက် ရလျှင် အလွန် သိသာပါတယ်။ အဲသလို ထိတာကို မသိမှတ် နိုင်ရင် လျှပ်တစ်ပြတ် အတွင်းတွင်ပဲ ကုဋေတစ်သိန်း ကြွေးတင် သွားရောဗျ။
ထိတာကို သိနေလျှင် “ရုပ်နှင့် နာမ်သာ ရှိပါကလား” လို့ သိလိမ့်မယ်။ ရုပ်နာမ်မှ တစ်ပါး ငါ၊ သူတစ်ပါး၊ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ မရှိဘူးဆိုတာ “ဘုရားရှင်၏ တရားတော် အမှန်ပါလား” လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိလိမ့်မယ်။ သူများကို မေးနေဖို့ မလိုပါဘူး၊ နှာဝမှာ လေထိတာကို သိနေလျှင် ထိုအချိန်မှာ အတ္တဆိုတဲ့ ကိုယ်မရှိဘူး။
ထို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်တယ်၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တယ်။ ထိတာကို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ “ရုပ်နာမ်မှတစ်ပါး ဘာမျှ မရှိပါကလား” လို့ သိတာကို နာမ်ရုပ် ပိုင်းခြားပြီး သိလို့ “နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်” လို့ ခေါ်တယ်။
တစ်ထိတည်း(ထဲ) ထိ၊ တစ်သိတည်း(ထဲ) သိနေလျှင် အတ္တစင်၍ ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်တဲ့ အကျိုးရတယ်၊ ဒါဟာ တဒင်္ဂပဟာန် ခဏ အချိန်လေးမှာ ရတဲ့ အကျိုး၊ နည်းတယ်လို့ မမှတ်ကြနဲ့။ “ကမ္မဋ္ဌာန်း ထိုင်ရတာများ ဘာမှလည်း မတွေ့ပေါင်၊ ဘာမှလည်း မရပေါင်” လို့များ မမှတ်လိုက်ကြ ပါနဲ့။ ဘုရား သာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒီလို အကျိုးထူးများ ရနိုင်တယ်။ စားဖို့ သောက်ဖို့ အသာထားပြီး အထူး ကြိုးစားကြဟု ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားတော် မူသည်ကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက် ပါကြောင်း။
စေတိယင်္ဂဏ၀တ်၊ ဗောဓိယင်္ဂဏ၀တ်၊ ဆရာသမား မိဘ၀တ်၊ သားမယားဝတ် ဒါတွေ လုပ်ရတာက စရဏကုသိုလ် သီလဘက်ကဗျ။ ဒါတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ ဆောင်လုိ့၊ ရှုမှတ်လို့ကော မရဘူးလား။ ဒီဝတ်တွေ မဖြည့်ဘဲနဲ့ သီလ ပြည့်စုံပါ့မလား၊ သီလ မပြည့်စုံရင် လိုလား တောင့်တတဲ့ ချမ်းသာကော ရပါ့မလားဗျာ။ ချမ်းသာမှု မရှိရင် သမာဓိ မရဘူး၊ သမာဓိ မရတော့ ပညာလည်း မရနိုင်ဘူးဗျ။
မူရင်းလိုချင်သူများ: ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူလေ့ရှိသော တရားအနှစ်သာရများ
This entry was posted on November 27, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ .
Pingback: ကျေးဇူးရှင် ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး « The Noble Eightfold Path
Very Precious Damma. Thanksalot for all to create this web site. I would like to request that if you can translate myanmar to ENGLISH, that will be very helpful to spread our buddha’s damma to every country.
Well done , well done well done.
I can’t read Myanmar on this website, why?
you might need zawgyi fonts in order to view myanmar on the webpage…